Hayao Miyazaki ayaa 75 jirsaday maalmo ka hor | Abuurista khadka tooska ah
Hayao Miyazaki, oo ka mid ah halyeeyada firfircoon ee 75 jirsada
In kasta oo ay ahayd dhawr maalmood ka hor markii uu 75 jirsaday aad iyo aad u qurux badan, haddana waa xilligii ugu habboonaa ee la keeni lahaa qaar ka mid ah garaadka fanaankan filimka 'Japanese animation' kaas oo ahaa halyeeyada ugu weyn aflaanta filimada quruxda badan leh sida Ruuxay, Deriskeyga totoro, Princess mononoke o Dabayshu way kacdaa.
Halyeey xilligiisii ​​oo aflaamtiisa oo dhan aan ka helayno midab iyo ku raaxeysigiisa nololeed shantaas sano ee xirfadda mihnadeed halkaas oo uu innagu qaaday cudurkiisa habka gaarka ah ee uu ugu neefsanayo adduunkan. Isaga guushii ugu horreysay ee weyni waxay ahayd Nausicaä ee dooxada dabaysha iyo tii horseeday abuurista Studio Ghibli, oo si kadis ah albaabada loo laabay waqti aan fogayn.
Kuwani kuwan 7 filim filim ah in aan ku soo ururiyey qaybahaas, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah shuqulladiisa sare. Miyazaki lafteedu waa ugaarsi carruurnimada oo shaqadiisa oo dhan wuxuu ka kooban yahay mawduucyo isku murugsan oo wax badan ku leh aadanaha, dabeecadda, horumarka, shaqsiyadda iyo masuuliyadda.
Filim sameeye qaas ah sida kuwa kale oo aad uyar oo hadana naga mid ah, inkasta oo uu horeyba uga fariistay nolosha xirfadeed. Taas aad iyo aad marna qalad kuma aha in lagu xasuusiyo iyo dhawr maalmood ka dib markay 75 gaaraan.
Iyada oo Ruuxu Fogyahay ku helay Bear Dahab ah Berlinale 2002 oo wuxuu ku helay Oscar filimkii ugu fiicnaa ee isla sanadkaas ah iyo waxa hadhow loo aqoonsan doono xirfaddiisa xafladda Filimka Caalamiga ah ee Venice.
Miyazaki waa mid ka mid ah kuwa waaweyn Ku socota kuwa taariikhda shineemooyinka horeyba boos ugu lahaa inay xusuusiyaan isla waqtigaas in dhammaan filimadooda ay yihiin shaqooyin farshaxan. Farshaxanyahan aan ka xasuusano halkan khadadkaan kooban oo aan qaar ka mid ah kula wadaagno sawirro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Hayao Miyazaki, oo ka mid ah halyeeyada firfircoon ee 75 jirsada
Microbiology oo ku jira Luke Jerram's Sculptures
Kubadaha Bariiska Farshaxanka Nabadda ee Nabadda